Khabiirka Cilmi-baarista ah ee Saadaasha Maqalka mustaqbalka Webka Digriiga
Webka xoqidda waa farsamooyinka caamka ah ee ururinta macluumaadka laga helo netka. Iyadoo la yiraahdo waa muhiim oo kaliya waa wax aad u weyn. Waa wax aan loo baahneyn. Macluumaadku waa awood, iyo hay'ad kasta oo ka maqan waa la bedelay, sidaa daraadeed duubista webka waa dhiig oo dhammaan noocyada ganacsiyada internetka ah.
Haddii ay tahay urur NGO ah, urur faa'iido leh, bilowga, shirkad dhexdhexaad ah, ama xitaa shirkad Fortune 500 ah, waxay dhab ahaantii ku socotaa macluumaadka ururinta. Sidaa darteed, muhiimadda qashin-saaridda shabakadu ma noqon karto mid aad u xoogan.
Caqabadaha ku jira dunnida shirkadu marnaba ma xajin karin hadda. Ciyaartoyda ku jira warshadaha kala duwan hadda waxay isticmaalaan hub kasta oo ay ku dhex jiraan si ay u tartamaan. Dhowaan, ururadu waxay billaabeen inay isticmaalaan duubista webka iyagoo ah hub si ay ula dagaallamaan tartamayaashooda. Marka dhan, markaad haysato macluumaad dheeraad ah oo ka khuseeya kuwa kaa soo horjeeda, waxaad yeelan doontaa faa'iido iyaga ka weyn. Aqoonta, waxay yiraahdaan, waa awood. Inkasta oo warshadaha warshadaha ee webka ay buuxsamaan xalal badan, waxaa loo qaybin karaa 3 qaybood oo keliya, waxayna yihiin:
Dhismaha codsigaaga saarista ama naftaada software ama adiga oo kireysta barnaamijyada
19) Inaad ku sii socotid adeega adeega shabakadda saddexaad ee qaybta saddexaad
Iibsiga sheyga xog-bixinta guud
Dhamaan saddexda xal waxay leeyihiin faa'iidadooda iyo faa'iidooyinkooda. Ka sokow, qaybta xalka ugu habboon ee shirkad kasta waxay ku xiran tahay baahida loo qabo baahida ganacsiga.
Sida tiknoolijiyada kale, shabakadda webku waxay sii wadi doontaa horumarinta iyo horumarinta. Sidaa daraadeed, maqaalkani wuxuu diiradda saari doonaa mustaqbalka shabakadda webka. Ka hor intaanay sii socon, waa lagama maarmaan in la caddeeyo fikradaha kor loogu soo qaaday qodobkan oo ku saabsan mustaqbalka shabakadda websaydhku waa uun sifeyn iyo feker ahaaneed. Iyadoo maskaxda lagu hayo, halkan, mustaqbalka fiirinta webka waxaa loo arkaa aragtiyo kala duwan.
Marka laga eego aragtida sirta ah
Sababtoo ah sirdoonka caannimada loo adeegsado qayb kasta oo nolosha ah, waxaa la aaminsan yahay in tiknoolijiyada loo adeegsan doono si weyn ujirta webka mustaqbalka dhow. Si kale haddii loo dhigo, robots ama mashiinno caqli leh ayaa la abuuri doonaa si loo kormeero iyo xogta xoqidda si joogto ah shirkadaha kala duwan.
Dabcan, robots waxaa mar horeba loo adeegsadey shabakadda websaydhka, laakiin midkoodna ma sameyn karo isbeddel weyn oo ku yimaada website-yada bartilmaameedka iyada oo aan la dhexgelin. Tusaale ahaan, haddii qaabeynta goobta bartilmaameedka isbeddelayaan, hadda jira qalab duuban shabakadda ma awoodi doonaan inay xoqaan goobta iyada oo aan la isticmaalin isticmaalaha qalabka waxoogaa yar. Tani ma noqon doonto dhibaato mustaqbalka shabakada super-caqli-gal ah oo baabi'inaysa robots maxaa yeelay waxay awoodi doonaan inay isticmaalaan go'aankooda ku aaddan inay wax ka qabtaan wixii isbeddel ah ee ku yaala bartooda bartilmaameedkooda inta lagu jiro web-ka-goynta wax yar ama aysan jirin faragelin aadane. Iyaga ayaa dhawaan la abuuri doonaa haddii aan horey loo abuurin. Tirada ugu weyn ee Google waa Google sababtoo ah ganacsigeeda ugu muhiimsan waa in ay gurguurto oo ay xoqdo boggaga internetka oo waxay ku socotaa websayd kasta oo martigeliyey iyo dhammaan xiriirkooda. Waxay raacaysaa in Google laga yaabo inuu bilaabo inuu bixiyo adeega adeegga duugista. Haddii ay sidaas tahay, waxay noqon doontaa shirkadda ugu wayn ee ugu wacan ee shabakada ah tan iyo markii ay horey u soo rogtay webka. Macaamiishu waxay u baahan yihiin oo keliya inay ku qoraan URL-yada bogagga shabakadaha lagu beegsanayo, waxayna helayaan dhammaan waxyaabaha ay u baahan yihiin Google. Ka dib oo dhan, mawduucyada shabakadaha oo idil waxay horayba ugu jireen xogta macluumaadka ay ku qoran yihiin.
Sabab kale oo Google ah oo loo bilaabi karo bixinta adeegyada adeega shabakadda waa in ay u baahan tahay wax yar ama dadaal dheeri ah si loo dilo. Shirkaddu waxay ku noolaaneysaa bogagga shabakadaha horeba. Inaad haysato xogta loo baahan yahay ee gacanta oo dhan marwalba waxay ka dhigeysaa Google in ay bixiso wakhti go'an oo soo noqnoqota oo ah in adeeg bixiyeyaasha kale aysan weligood awoodin.
Maadaama Google uu awood u leeyahay inuu bixiyo adeegga iyada oo aan jirin dadaal dheeri ah, waxa kale oo laga yaabaa inuu bixiyo qiime tartan oo aan urur kale la. Sida ay shirkaddu u saameysay warshadaha raadinta mishiinka, Google ayaa ugu dambeyntii qaadan karta qaybta shabakadda webka. Dhibaatadaasi way wanaagsan tahay.
Marka laga eego falanqaynta iyo ururka muuqaalka
Iyadoo aan loo eegin qiimaha ay noqon karaan, kabo waa wax aan faa'iido lahayn nin aan lahayn lugaha. Sidaa darteed, xogta laga yaabo inaanay u adeegsanin hay'ad leh xirfado falanqayn liita. Xaqiiq ahaan, xogta lafteeda maahan mid aad muhiim u ah, waa sida aad u isticmaali karto. Marka, shirkadaha sii wadaan inay sii wataan dadaallada dadaallada webka, waxay sidoo kale bilaabi doonaan in ay ka faaiidaystaan ​​ilo badan si ay u kiraystaan ​​falanqeeyayaasha xogta aadka u liita ama tababarka shaqaalahooda ururkooda xogta, iyo falanqaynta xogta.
Marka la eego xog isku mid ah, ururrada qaar ayaa si ka fiican u isticmaali doona kuwa kale. Tani waa sababtoo ah waxay leeyihiin dad leh xirfado falanqeyn xogta. Sidaa darteed, mustaqbalka xajinta webka ayaa si dhab ah u saamayn doonta baahida loo qabo ururinta xogta iyo falanqaynta.
Marka laga eego dhinaca nabadgelyada
Inta badan qalabyada kaydka ee hadda jira ayaa laga yaabaa inaanay firfircooneyn sababta oo ah ururo badan ayaa sii wadi doona inay sii wataan dadaallada ku aaddan samaynta boggooda internetka ee aan macquul ahayn. Markaa kadib, kaliya shirkadaha isticmaalaya adeega adeega shabakada saddexaad ee sadexaad ama kuwa soo geliyey qalab aad u sarreeya ayaa wali awoodi doona inay xoqdo xogta laga helo boggag kale.
Gebogabadii, waxaa muhiim u ah ururrada in ay bilaabaan inay naftooda isu taagaan mustaqbalka bogga. Qaar ka mid ah talaabooyinka lagama maarmaanka ah ee aad doonaysid inaad tixgeliso waa:
1. Waa inaad bilowdid inaad ka shaqeysid horumarinta riyooyinka sirta ah ee dabiiciga ah ee xakameynaya xogtaada waxay u baahan tahay si wax ku ool ah.
2. Waa inaad sidoo kale sii xoojisaa dadaalka aad ku sameyneyso in aad boggaaga aad u adkeyso inaad xoqdo. Maxaa dhacaya haddii qaar ka mid ah tartamayaashu ay si fudud u heli karaan mawduuca boggaaga markaad adigu xoqin kartid? Xasuuso, macluumaadka badan ee aad ka qabtid tartamayaashaada, waxay sii badaneysaa fursadahaaga aad ku jabin kartid.
3. Waa inaad sidoo kale bilowdaa inaad si dhab ah uga shaqeyso horumarinta ururkaaga iyo xirfadaha falanqaynta. Tani waxay la mid noqon kartaa xaaladaha dagaal. Mararka qaar, waad ku turunturoon kartaa macluumaadka codsiga ee tartamayaashaada ama kuwa kaa soo horjeeda. Macluumaadku wuxuu noqon doonaa mid aan la isticmaali karin haddii aadan awoodin sida ugu dhaqsaha badan. Falanqeeyayaasha xogta aadka u khibrad badan ayaa badanaa ku muujiya isbeddellada qaarkood ee xogta la uruuriyay si sahlan oo aad u baahato inaad u shaqaaleysid laba ka mid ah.
Xilasho, inaad awood u yeelatid in aad diyaariso ururkaaga fikradda xogta weyn iyo mustaqbalka shabakada webka ayaa kaalin muhiim ah ka qaadan doonta guusha muddada-dheer ee ganacsigaaga Source .